Waxaan idinku soo dhaweynaynaa adiga iyo qoyskaaga barnaamijka WIC. Fadlan na soo wac haddii aad su'aalo qabto adigoo garaacaya: 1-877-WIC-KIDS (1-877-942-5437). Ma waxaad dhibaato ka haysataa barnaamijka WICShopper? Email JPMA at WICShopper@jpma.com
Utah WIC Wacyi-gelinta Wicitaanka
Utah WIC Hanuuninta - Ingiriisiga
Adeegsiga Jeegaaga WIC
A: Beddelaadyo dhowr ah ayaa loo ogol yahay cuntooyinka qaarkood. La xiriir kilinigaaga WIC si aad ugala hadashid fursadahaaga iyo inaad isbeddesho jeegagaaga. Looma beddeli karo bakhaarada. Waa inaad heshaa waxa lagu daabacay jeegga haddii aad doorato inaad cuntadaas iibsato adoo isticmaalaya jeegagaaga WIC.
A: Cuntada WIC waxaa loogu talagalay kaliya qofka loogu magac daray jeegaga. Haddii kuwa gurigaaga haysta jeegaga WIC aysan cunin cunto WIC-ga ah, ha ka helin dukaanka ama shaqaalaha rugaha caafimaadka weydii inay ka saaraan jeegagaaga. Haddii aad heshay cuntooyinka WIC ee aan loo baahnayn, u geey xarunta kiliinigaaga WIC.
Ha iloobin inaad soo qaadato tigidhka WIC ee dukaanka!
Waxaan ka guureynaa bixinta waraaqo waraaqo ah bartamaha-2020 waxayna soo bandhigaysaa faa'iidooyin elektiroonig ah. Tani waxay ka baari doontaa dukaanka raashinka si sahlan oo qoto dheer. Iyada oo eWIC, waxaad isticmaali doontaa kaar caqli ah si aad u iibsato cuntadaada WIC halkii aad isticmaali lahayd jeegaga warqadda.
Iyada oo la adeegsanayo eWIC, waxaad awood u leedahay inaad…
Iibso cuntada kaliya ee aad u baahan tahay
Samee iibsiyada oo dhan bisha
Hayso kaadh ammaan ah oo u shaqeeya sida kaadhka deynta
Iibso kaliya cuntooyinka ku qoran jeegga iyo buug yaraha buug-yaraha ee Utah WIC.
Waxaan fahansanahay in kaqeybgalka aan ku qotomahay, adeegga la-talinta ee internetka ku salaysan ee Utah WIC waa ikhtiyaari oo ku lug leh xiriirka qarsoodiga ah ee La-taliyayaasha Is-bahaysiga ee bixiya taageerada naas-nuujinta.
Recibir baaritaan ku samee baqshiinka alaabooyinka. WIC ma jiraan wax kumbuyuutar ah oo loo yaqaan 'alimentos que necesito'.
Recibir waa inaad wargelisaa si aad u heshid hawlaha aad u baahan tahay.
Recibir waa in aad la socotaa.
Recibir waa la ogeysiinayaa kharashka ku baxa, ka dibna jimicsiga.
Dib-u-Celinta Qaadashada Wareegtada Wicitaanka Dhagaha WIC y de la tienda. Si aan dib ugu soo celineyno, waa in la ilaaliyo WIC. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad si xeel dheer u noqotaa, si aad u heshid shakhsiyadeed oo ku saleysan WIC lacag u fidin.
Protección de mis derechos civile. Waalidka WIC waa in ay ka qeyb qaataan barnaamijka WIC.
Xakameyn la'aan. Laga bilaabo taariikhda WIC waa in aad ku qorto foomka.
Mis ingresos. Daree wargelin ku saabsan in qofkasta oo ka mid ah uu yahay mid ka mid ah casa. WARARKA WAREEGA SHAQADA WIC ee khaaska ah.
Macaamiisha Medicaid, SNAP / Cupones Para Alimentos - "Cuntooyinka Cuntada", o El Programa de Empleo Familiar (TANF). WAREEJINTA SHARCIYEYSO WIC WAY SIDA LAGA HELI KARO
Qalbigayaga. Wargalinta shaqsiyadeed ee WIC si aad u ogaatid astaamaha aad ku nooshahay.
Mi dirección. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan WIC de cambios en mi dirección o teléfono. Puedo pedir una Verificación de Certificación (VOC) si aad u heshid mudo dheer. Muujineysaa inaan ka qayb galo WIC.
Tixraaca ku qanacsanaanta ama ujeedadaada. Maya, waa bilaa hudheel, aan lahayn hudheello, ma jiro amenazare o ugu dambeyntii nadie.
Usar to alimentos de WIC únicamente para la persona que tenga el nombre impreso en jeeg.
Qalabixin la xiriirta qadarin dheeraad ah.
Looma haysan wax shaati ah, ha ahaado mid isku xiran si loo eego o alimentos de WIC. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga internetka, adigoo adeegsanaya tixraac. Wareegtada alimento qoob-ka-wado o Fadlan si aad u qadarin badweynta WIC, oo ah WIC, waa inaad ka heshaa WIC. Halkaan waxaad ka heleysaa bogga ugu dambeeya.
Usar wuxuu hubiyaa sólo dentro de las fechas impresas en el check.
Dib-u-qabashada waxay ku xiran tahay lana socotaa. Ka qayb galayaasha barnaamijka WIC ee ilegal.
Asistir waxaa loo yareeyaa caan ka mid ah llamar a la cínica para cambiar la cita. Dhiirigelinta qadarinta adoo si aad ah u calaamadeynaya, si aad u feejignaadaan.
Xakameynta khariidadku waxay muujinaysaa aqoonsiga iyo ogeysiis ku saabsan booqashada iyo baaritaanka WIC.
Cuidar mis oo hubiya WIC como si fueran dinero. Qalabka ka hor inta aan la gaarin.
WARARKA SIDA LOOGA HELO WIC DEG DEG AH OO KA HELI KARTAA SIDA LAGU QAADO Ma jiro wax war ah oo ka soo baxa.
Ku soo dheji jimicsi si aad u hubiso inaad u baahato.
Looma baahna baaritaanka cambio al.
Firmar el jeeg ah oo lagu qiyaaso guud ahaan.
Seguir las Reglas e tilmaamayaasha "Tilmaamayaasha Alimentos Autorizados WIC".
Weydiimsan tahay inaad ka jawaabto su'aalahaaga (oo ah wax laga beddelo). Hawlwadeennadu waa inay noqdaan kuwo la shaqeyn karo, oo ah kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijka WIC.
Shirkaduhu waxay ku xiran yihiin inay yihiin kuwo dhexdhexaad ah. Shahaadadaas waa inaad u sheegtaa si sax ah. Shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed wuxuu u baahanyahay in la ogeysiiyo si aad ula socoto. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dib-u-heshiisiinta iyo ficil-celinta ficil-celinta ficil-celinta (waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan ficilada falsafada iyo ficil-u-saarka ficil-celinta) si aad u ogaatid ficil-celin ku saabsan ficil-celinta si aad u ogaatid in ay tahay mid aan ka mid aheyn madaniga ah o o ogyihiin falal dambi ah.
Si aad u muujisid barnaamijka, si aad u aragto WIC. Taas macnaheedu waxa weeye, WIC waxay u baahan tahay in lagu caawiyo, oo la qiimeeyo, si loo qiimeeyo. Hoos u dhigo qashinka loo yaqaan 'Responses de mi apoderado'. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiyadeedu waa in la ogeysiiyo WIC. Dhiirigelinta qaxoontiga, waa in aad ku qortaa, adoo adeegsanaya magacaaga, ka hor inta aanad u sheegin.
WIC ayaa ka warqabta suxufiyiinta. Fariin qoraal ah oo ku saabsan mareegaha, llamadas por teléfono, google Usted puede solicitar no rikoorada rikoodhada. Si aad u aragto qoraallada qoraallada, Mudanayaasha in ay ka mid yihiin qoraalka 22300 con la palabra JOOJIN.
Wixi xog ogaal ah ayaa ka mid ah barnaamijka WIC ee ku saabsan barnaamijka ku saleysan barnaamijka salud yutrición. Hagaha Agaasimaha Guud ee Hay'adda Utah waa in aad ka heshay barnaamijka aad u baahantahay si aad u ogaato barnaamijka WIC. ku wargelin karaa sobre la asistencia; waa in la ogeysiiyaa nashiraadyada ama barnaamijyada ku habboon in la helo ama loo dhiibo; si aad u maamusho hay'adaha maamulka ama hay'adaha maaliyadeed ee loo baahan yahay in lagu qiimeeyo macalimiinta iyo macallimiinka Utah ay ku wargaliyaan. Usted pule pedirle al shaqsi ahaan WIC más información acerca de estos programas